नेपाल टेलिकमको प्रथम महिला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर पनि व्यवसायलाई अघि बढाउनुको साटो कमाउ धन्दामा लागेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कामिनी राजभण्डारीकै कारण नेपाल सरकारको लगानी रहेको नेपाल टेलिकम विस्तारै धरासायी बन्दै गएको छ ।
भ्रष्टाचार, कमिशन, गुणस्तरहिन उपकरणको खेलमा लागेकी सिईओ राजभण्डारीले यसबीचमा केही पटक अख्तियारको कठघरामा समेत उभिएर बयान दिईसकेकी छिन् । उनको मुद्दा छिानोफानो भयो र अझै अनुसन्धान जारी छ भन्ने बिषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । यद्यपि राजभण्डारीले फोरजी सेवा सञ्चालन गर्दा ठूलो मात्रामा रकम घोटाला गरेको सुत्रको दावी छ । फोरजी सेवा सुरु गर्दा करोडौ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेकी राजभण्डारी पछिल्लो समय भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि निकै तनावमा दिनहरु व्यतित गर्ने गरेकी छिन् । असारको पहिलो साता टंगालस्थित अख्तियारको कठघरामा बयान दिएपछि राजभण्डारीको दैनिकी तनावमय हुने गरेको टेलिकम स्रोतले जनाएको छ ।
टेलिकमको विदेश भ्रमणको कोटामा बिशेषज्ञ भानेर श्रीमान र छोरालाई समेत भ्रमण गराउने राजभण्डारीले टेलिकमलाई संस्थागत भन्दा पनि परिवारको नीजि काममा धेरै ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको सूत्रको दावी छ ।
राजभण्डारीलाई टेलिकमकै अर्का प्रबन्धक प्रदिप ठाकुर साथ दिएको सूत्रको दावी छ । अख्तियारमा बयानका लागि पुगेकी राजभण्डारी अहिले उत्तः काण्ड मिलाउन टेलिकमको टुजीका उपकरण एनसेल तथा हेलो मोबाइललाई कवाडी मूल्यमा बिक्री गरी सो बापतको आम्दानी भएको रकम परिचालन गर्दै आएकी छिन्। अख्तियार स्रोतका अनुसार, आगामी दिनमा आवश्यक परे राजभण्डारी तथा प्रबन्धक प्रदीप ठाकुरलाई हिरासतमा राखेर समेत कारबाही अगाडि बढ्न सक्नेछ । प्रारम्भिक छानविनमा टेलिकमको फोरजी अनियमितता प्रकरणमा मुद्दा चल्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।
सिईओ राजभण्डारी निजि क्षेत्रका दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीसँग मिलेर जानाजान टेलिकमलाई ओरालो लगाउने र निजी कम्पनीलाई समृद्ध बनाउन लागि रहेकी छिन् ।
स्रोतका अनुसार, प्रबन्धक प्रदीप ठाकुरको जागिर अवधि अब करिब दश महिना मात्र बाँकी छ । अहिले सीटीओमा रहेका उनी दश वर्षसम्म प्रोक्योरमेन्ट शाखाका प्रमुख भएर कार्यरत रहे । उनले आफूले मन पराएका फर्म कम्पनीहरुसँग प्रशस्त अनुचित लाभ लिई अकुत धन संकलन गरेको सेतको दाबी छ । यसै अवैध रकमको बलमा ठाकुर जोकोही प्रबन्ध निर्देशक आए पनि उनलाई आफूले चाहे अनुसार सबै कामकारबाही गर्न सहमत पार्ने गर्थै अन्यथा दस वर्षसम्म उनी प्रोक्योरमेन्ट जस्तो लाभकारी शाखाका प्रमुख भएर बस्न कसरी सफल भए ? काठमाडौ बाहिरका कार्यालयमा उनको सरुवा किन भएन ? टेलिकमकै इमान्दार कर्मचारीको प्रश्न छ । स्रोतका अनुसार, अब ठाकुरको पदावधि सकिनै लागेकोले उनको जसरी भए पनि टेलिकमलाई धराशायी बनाएरै भए पनि फोरजी सेवालाई माध्यम बनाएर आफ्नो अकुत सम्पत्तिलाई दोब्वर अकुत बनाउनतिर लागेका छन् । तर विधिको विधान ठाकुर जस्ताले चाहेर टर्दैन, जस्तो कर्म त्यस्तै फल मानिसले पाउँछ नै, टेलिकम कर्मचारीको भनाइ हो यो । उनीहरुले अख्तियारले ठाकुरमाथि कडाभन्दा कारबाही गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
टेलिकम कर्मचारीहरुका अनुसार, प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी केही वर्षपूर्व ल्यान्ड लाइनमा पदस्थापन गरिदा त्यहाँ तीन चार महिना पनि सफलतापूर्वक कार्य सञ्चालन गर्न सकेकी थिइनन् । यसैगरी प्रोजेक्ट प्रमुखमा पाँच महिनामै असफल भइन् । करोडौं रुपैयाँ नजराना दिएर प्रबन्ध निर्देशक पद पाउन सफल कामिनी राजभण्डारीमा निर्णय क्षमता नभएको यथार्थ उनले तीन–तीन महिनासम्म महत्वपूर्ण कार्यका फाइल पेन्डिङ राख्नुबाटै प्रष्ट भएको कर्मचारीले बताए । निर्णयका लागि राजभण्डारी समक्ष पेस भई पेन्डिङमा रहेका फाइलको विवरण संकलन गरिए यो यथार्थ स्वतः प्रमाणित हुने स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार, प्रदीप ठाकुरले राजभण्डारीको यस असक्षमतालाई आफ्नो अकुत सम्पत्ति बृद्धि गर्न प्रयोग गर्नुसम्म गरिरहेका छन् ।
टेलिकममा कार्यकुशलता देखाउन नसकेकै कारण सरकारी लगानीको देशकै ठूलो दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले निरन्तर बजार हिस्सा गुमाउँदै गएको छ । जस अनुसार इन्टरनेट डाटा, मोवाइल प्रयोगकर्ताको संख्या घट्न थालेको छ । नेपाल टेलिकमका कामिनी राजभण्डारी सिईओको रुपमा कार्यरत रहुन्जेल टेलिकमको अवस्थामा सुधार नहुने र तत्काल सुधारको काम सुरु नगर्ने हो भने भविष्यमा अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ । —२०७४ साउन ९ गते सोमबार काठमाडौंबाट प्रकाशित नयाँं प्रकाश साप्ताहिकबाट साभार